Mayelana NATHI - Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd.
Izinsimbi zeTianjin Labor Scientific Co., Ltd. Itholakala eTianjin Innovation Industrial Park, eBeijing Branch of Chinese Academy of Sciences kuzwe elizimele lokubonisa indawo emisha. Ipaki lezamabhizinisi laseTianjin laseBeijing Branch leChinese Academy of Science liyimpumelelo ebalulekile ye-CAS ekuphenduleni ngenkuthalo kuhlelo lonke lwamasu "lwentuthuko ehlanganisiwe yaseBeijing, iTianjin kanye neHebei" ebekwa phambili yiKomidi Elikhulu leCPC, futhi ikhuthaza ngenkuthalo izimboni impumelelo yeSikhungo yokudlulisela esifundeni iTianjin. Ukuncika ethempelini, ezobuchwepheshe kanye nezimpumelelo izinzuzo zeBeijing Branch of Chinese Academy of Sciences, ezibophezele ocwaningweni nasekuthuthukiseni izinsimbi zokuhlaziya kanye nesoftware efana neFourier iguqule i-spectrometer ye-infrared, eduze ne-spectrometer ye-infrared, i-infrared detector detector, i-double beam infrared spectrophotometer , i-ultraviolet ebonakalayo eduzane ne-infrared spectrophotometer, i-ultraviolet spectrophotometer ebonakalayo, i-silica analyzer yamahhala othulini, njll, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo. Inikeza izixazululo ezihlanganisiwe ze-biomedicine, isayensi yezinto ezibonakalayo, i-petrochemical, ukuphepha kokudla, ukuvikelwa kwemvelo neminye imikhakha eminingi.
isebenza ngokukhethekile ekwakhiweni, i-R & D, kanye nezinsimbi zokumaketha zesayensi, neqembu elihlangene lokucwaninga nentuthuko lamaNyuvesi aseChina. Inhloso yethu ukuhlinzeka ngemisebenzi yokuncintisana kakhulu kumakhasimende ethu.
Ngaphambi kokuthi sibambe iqhaza esifundeni se-spectrometer, besibandakanyeka ekuhlolweni kwe-physics lab, kufaka phakathi imishini, ukushisa, i-electromagnetism, i-optics, imithombo elula, i-spectrometer nama-monochromators, itafula lokuhlukanisa i-vibration optical, njll. Imikhiqizo yethu yenzelwe ukusebenza ngesandla ukusiza abafundi baqonde izimiso kalula ngokuhlekisa, zithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwezemfundo.
Imithombo yethu elula ifaka isibani seMercury, isibani seSodium, isibani seBromine Tungsten nama-lasers ahlukahlukene.
Siphinde sibe nochungechunge lwemishini yokukhanya yomabili yamalabhu nezikhungo zocwaningo, ezinjengezintaba ezibonakalayo, amabhodi wesinkwa we-optical nezigaba zokuhumusha.
Sizinikela ekuhlinzekeni ikhwalithi ephezulu, ebiza imikhiqizo ephumelelayo kumakhasimende ethu emhlabeni wonke.
Manje kunabathengisi abaningi abavela e-USA, Australia, Africa, India, ASEAN, njll.
Isevisi ye-OEM inikeziwe.